China Mechanical erute Equipment Factory, Mechanical erute Equipment Supplier
Anyị adịchaghị TDTG usoro ịwụ mbuli bụ otu n'ime ndị kasị echekwa ngwọta maka granular ma ọ bụ pulverulent ngwaahịa njikwa. A na-edozi bọket na eriri kwụ ọtọ iji nyefee ihe. A na-etinye ihe ndị ahụ n'ime igwe site na ala ma gbanye ya site n'elu.
Ejiri ngwongwo yinye ihe nwere onu uzo na ihe mgbanwe. A na-etinye ọnụ ụzọ ámá mmiri na casing iji zere mmebi nke akụrụngwa. Ogwe enyemaka mgbawa dị n'akụkụ ngalaba nke igwe ahụ.
Onye na-ebugharị anyị na-ebugharị bụ nke kwesịrị ekwesị maka ịbuga ntụ ntụ, granular, lumpish, ezigbo na ihe ndị siri ike dị ka kol, ash, ciment, ọka, na ihe ndị ọzọ. Ngwongwo ihe kwesiri ekwesi kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 180 ℃
Tubular ịghasa ebu
Ntụ ọka ntụ TLSS usoro tubular ịghasa ebu na-bụ-eji maka quantitative nri na ntụ ọka na igwe nri na igwe nri.
Dika igwe na emeputa ihe ekuku nke uwa nile, akuku igwe a na - ebughari ebe a na - eme ihe n’ebe a na - emeputa ahihia, ulo ike, ọdụ ụgbọ mmiri na oge ndi ozo maka inye granule, powder, lumpish ma obu bag, dika oka, coal, mine, na ndi ozo.
Ihe eji ebu ohuru ohuru
A na-ebufe eriri ebu na ọka, kol, nke m, ụlọ ọrụ ike eletrik, ọdụ ụgbọ mmiri na ubi ndị ọzọ.
Ntụ ọka igwe akwụkwọ ntuziaka na pneumatic slide n'ọnụ ụzọ ámá na-ọtụtụ-eji ọka na mmanụ osisi, ndepụta nhazi osisi, simenti osisi, na chemical osisi.
Lower njupụta Akụrụngwa Discharger